Alaabada u adeegta baahiyaha caafimaad ee dadweynaha. Sida ay qabto WHO, alaabooyinkan waa in la heli karaa “waqti kasta, oo ku filan, qaababka qiyaasta ku habboon, oo leh tayo sugan iyo macluumaad kufilan, isla markaana qiimaha qof iyo bulshada ay awoodi karaan”.
Qalabka nooca Bay-ha
T-bolt leh ciribta guga
10mm nooca Mareykanka ah hose clmp
Shayga ayaa isticmaalaya suunka bir-gelinta iyada oo la adeegsanayo geedi socodka-daloolka si ay muraayadihiisa ugu adkeeyaan suunka birta.
Fudud in la isticmaalo, waa la goyn karaa dherer kasta.
Qalabka loo yaqaan 'Pipe clamps' waxaa lagu dalban karaa iyadoo loo eegayo sawirrada macaamiisha.
Qeybo kala geddisan oo kala shaandheyn ayaa lagu dalban karaa iyadoo loo eegayo sawirrada macaamiisha.
Qalabka isku-xidhka ahi wuxuu leeyahay laba xarigyo-xireed oo ah 20mm iyo 32mm. Halkaas oo dhammaantood ay ka buuxaan birta iyo dhammaan 304 qalabka.
Nooca Britishka ah ee dhuuxa ku xidhma alxanka
Qeybta hoose ee guryaha nooca hojeelka ee ingiriiska oo alxamdu waa alxamid.
Qalabka V-band wuxuu ka kooban yahay xajiyeyaal bir ah oo birifaati ah, iska caabin wanaagsan oo la xiriirta dhismooyinka. Qalabkaani waxaa badanaa loo isticmaalaa cawlan, calaamadaha cabbiro kala duwan looma adeegsan karo jeexitaan isku mid ah, ama daadad ayaa dhici doona, marka baaritaanku wuxuu u baahan yahay inuu bixiyo aalad ama sawirro jeexdin leh.
Waxaa loo istcimaalaa in lagu xiro dusha turbocharger iyo tuubbada qiiqa gawaarida. Waxay ka hortegi kartaa supercharger inuu buuxiyo culeyska oo gariirka uu waxyeelo iyo culeyska supercharger.
Qalabka aan tooska ahayn ee garaaca tuubada buufinta
Sheyga aan tooska ahayn ee garaaca tuubada aan caadiga ahayn waa 304 shey, oo bixiya iska caabin wanaagsan oo duubka, culeyska fudud iyo rakibo ku habboon.
Ka hor inta U-qaabeeya isku-xidhka miiska isku-xidhka, si si fiican loogu go'aamiyo jihada isku gardaaga, waxaa lagula talinayaa in la calaamadeeyo meesha hagaajinta marka hore, ka dib weld in la xidho, oo la geliyo qaybta hoose ee jirdhiska xuubka, oo ku dheji tuubada, dhig nuska kale ee tuubada tuubada iyo daboolka, kuna adkeyso xoqadaha. Xusuusnow inaad si toos ah u duubto weelka hoose ee tuubbada dhuumaha.
Isku-laabmaanta isku-laaban, tareenka hagaha ah waxaa lagu dhejin karaa aasaaska, ama lagu hagaajin karaa boolal.
Marka hore rakib qeybta sare ee tuubada qeybta kore iyo qeybta hoose ee tuubbada, tuubbada si loo hagaajiyo, ka dib saar qeybta sare ee tuubada jirka qeybta kore, ku dabool daboolka, xirida daboolka si looga hortago inuu leexleexo.
T-bolt-ka oo leh xirmooyinka guga ayaa kudayacda ilaha isku-dhafka ah ee T-bolt si ay u qaabilaan kala duwanaanshaha baaxad weyn ee wadajirka, iyagoo bixinaya cadaadis shaabad isku mid ah iyo waxqabadka sumadda oo la isku halleyn karo.